Olona An-Jatony Namonjy Diabe Tao Kambodza Ora Vitsy Taorian’ny Nitifirana Ilay Mpitsikeran’ Ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Olona An-Jatony Namonjy Diabe Tao Kambodza Ora Vitsy Taorian'ny Nitifirana Ilay Mpitsikeran’ Ny Governemanta
Voadika ny 12 Jolay 2016 5:32 GMT
Nozarain'ireo mpisera Twitter ny sary maro tamin'ity sarin'i Kem Ley ity. Avy amin'ny: ‏@RPanh
Maty voatifitra tao amin'ny fivarotana tobin-tsolika tao Kambodza tamin'ny 10 Jolay lasa teo ilay mpandalina ara-politika fanta-daza sady mpitsikera ny governemanta. Fotoana fohy taorian'izay dia efa tafavory ny Kambojiana an-jatony teo akaikin'ny toerana nitrangan'ny heloka bevava, ary nanao diabe tao Phnom Penh, renivohitry ny firenena, mba hanameloka ny famonoana.
Mpaneho hevitra malaza sy mpikaroka fantatra amin’ ny tsikerany mamely mafy ny governemantan'ny Praiminisitra Hun Sen i Kem Ley ilay mpitarika ny Antoko Demokraty
Teo amin'ny fitondrana nandritra ny telopolo taona mahery i Hun Sen
Nitranga andro vitsivitsy taorian'ny famoahana tatitra fanadihadiana tsy miankina mampiseho ireo raharaham-barotra mampametra-panontaniana ataon'ny fianakavian'i Hun Sen ny famonoana an'i kem Ley.
Voasambotry ny polisy haingana ilay nitifitra an'i kem Ley.
Niaiky ny heloka bevava nataony tao amin'ny lahatsary ilay noahiahiana, ary nilaza fa novonoiny i kem Ley satria ananany trosa ity farany .
Tsy nanaiky ny hino izany ireo Kambojiana maro satria mihevitra izy ireo fa nisy hifandraisany amin'ny toe-draharaha ara-politika miharatsy ao amin'ny firenena ny famonoana an'i kem Ley, satria mpitarika maro ao amin'ny antoko mpanohitra sy mpikatroka ampolony maro no noampangaina, nosamborina [mg] ary norahonan'ireo manampahefana tato anatin'ny herinandro maromaro izay.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo sary tao Phnom Penh ora vitsy taorian'ny famonoana an'i kem Ley:
#Cambodia: Vahoaka betsaka no tafangona teo amin'ny toerana nahitana ny fitifirana an'ilay mpandalina ara-politika kem Ley ary maty io maraina io pic.twitter.com/ciT96nLjhE
Nivory teo akaikin'ny toerana namonoana an'i Ley kem io maraina io ireo mpisaona tezitra, nandrakotra ny fiarany tamin'ny voninkazo sy emboka. pic.twitter.com/sgunoGKoO1
Nivory teo ivelan'ny fivarotana izay nitifirana an'i kem Ley io maraina io ny vahoaka tsy mitsaha-mitombo isa. #cambodia pic.twitter.com/qZbekqKmpS
Nanoratra ny olona hoe ” mahery fon'i Khmer i kem Ley.” pic.twitter.com/VIqUv9SGfw
Nosolain'ny lehilahy iray ny lohany noho ny fahafatesan'ilay mpandalina kem Ley
Nahasarika vahoaka be tao Phnom Penhy ny diabe nilanjana ny fatin'i kem Ley :
Ireo ny mpitazana tao amin'ny Caltex Bokor fa maty voatifitra tamin'ny andro mazava io maraina io ilay mpandalina malaza Kem Ley .pic.twitter.com/SD7PhiYgbZ
Manohitra ny famonoana an'i #KemLey #Cambodia pic.twitter.com/0ntj7BW9Cs ny olona an-jatony maro teny an-dalambe tao amin'ny Federasionan'i Rosia sy Monivong.
Nifandimby nilanja ny vatan'ilay mpandalina ara-politika novonoina, Kem Ley, ny olona an-jatony ho any Wat Chas ao Chroy Changvar #cambodia
Ny matson'ny filanjana ny vatan'i kem Ley, mpandalina ara-politika maty voatifitra io maraina io #KemLey pic.twitter.com/bXw0cqQ0qV
Tsy nitsaha-nitombo ny vahoaka teny ampananterana ny vatan'ilay mpaneho hevitra ara-politika novonoina kem Ley . pic.twitter.com/UdvqlI0x2U
Nanome ako ny fihetseham-pon'ny mpisera aterineto maro i Kounila mpanoratra :
Tsy mino ny hanihany amin'izao fotoana izao aho fa nisy namono noho ny trosa i #KemLey. Nahita ny lahatsoratra navoakany tao amin'ny FB ireo Kambojiana, ary nahalala mazava tsara ny zava-nitranga. Mandria Am-Piadanana
Afaka manome hevitra amin'ny antony nahafahafatesany ny dinidinika farany nataon'i Kem Ley tao amin'ny onjam-peo:
Hoy i Kem Ley tao amin'ny onjam-peo tamin'ny herinandro lasa: “Rehefa te hamono [olona] ny fitondrana, dia lazainy fa [mpiray tetika] tsy vonon-kiaro ny fitondrana izy ireny. Ary avy eo vonoiny. ” #cambodia
Niaraka nisaona ny fahafatesan'i kem Ley tamin'ireo Kambojiana ny Masoivohon'i Etazonia:
Vaovao maha-tohina sy mampalahelo : famonoana an'i #KemLey, iray amin'ireo mpandalina ara-politika ao # Kambodza malaza indrindra. Maneho ny fiaraha-miory lalina ho an'ireo fianakaviany.
Na ny Praiminisitra Hun Sen aza dia nanameloka ny famonoana ary nanome baiko ny polisy mba hamaha ny raharaha sy hanao fanaraha-maso henjana amin'ny fanarahamaso ny fitaovam-piadina.
Hisy fanomanana fandevenana lehibe ato anatin'ny andro vitsivitsy araka ireo tatitra. Azo ampiasaina hanaraha-maso ny vaovao mifandraika amin'ny famonoana ny tenirohy #KemLey.